Momba anay - Wuxi Lead Precision Machines Co., Ltd.
Wuxi Lead Precision Machines Co., Ltd. dia fivarotana milina Cnc manompo amin'ny faritra miendrika Cnc milina, fanitsiana metaly ary fanamboarana vy amin'ny takelaka isan-karazany.
Manana traikefa maodely maherin'ny 15 taona amin'ny famokarana fitaovana sy prototypes izahay ho an'ireo mpanamboatra fitaovana tany am-boalohany (OEM) manerana an'izao tontolo izao.
Orinasa tsy miankina miorina amin'ny 2000 izahay.
Amin'ny voalohany dia tsy misy afa-tsy masinina CNC 2 ao amin'ny atrikasa misy anay ary ny orinasanay dia tsy orinasa lehibe. Na izany aza, niaraka tamin'ny traikefa nanananay sy kalitao tena tsara, dia nitombo haingana niaraka tamin'ny mpanjifanay ny orinasanay.
Niakatra ho 10 ny masinina CNC anay. Ary nitombo ny mpiasanay tamin'ny 2 ka hatramin'ny 12.
Nifindra tany amin'ilay orinasa vaovao izahay. Ary manomboka ho mpamatsy faritra OEM Company Amerikana izahay.
Manana milina CNC mihoatra ny 20 isika izao. Ary nanao prototypes fitaratra titanium sy fibre izahay ho an'ny orinasa Miaramila.
Noho ny kalitao avo lenta sy ara-potoana, dia natolotray ny mpanjifanay irlandey mba ho mpamatsy Wheel Hub ho an'ny Racing Cycle amin'ny Lalao Olaimpika London 2012.
Izahay dia Amerikana Miaramila Miaramila voatondro mpamatsy titanium sy Glassfiber CNC Machined mpamatsy. Mandritra izany fotoana izany dia nanomboka niara-niasa tamin'ny orinasa Auto Tuning malaza indrindra tany Amerika koa izahay.
Nanorina sy nifindra tany amin'ilay orinasa vaovao izahay. Tamin'ity taona ity, lasa 50 mahery ny mpiasanay, ary nanangana ny biraonay tany CA, Etazonia.
Andraso ny fizotran'ny Machining CNC, niitatra tamin'ny fizotran'ny metaly sy metaly Sheet ny orinasantsika.
Hatramin'izao dia mbola manitatra izahay izao, ny tanjonay dia ny MANAO FIVAROTANA MIRINA AMIN'NY CNC anay mba ho anao.
Manao ampahany manokana izahay miaraka amina foto-kevitra dimy lehibe.
Nandritra ny taona maro dia nanangana laza izahay amin'ny maha orinasa mitantana ireo asa sarotra tsy tian'ny olon-kafa hatao. Ny fahatapahan-kevitra mitohy hamokatra ampahany sy singa misy lesoka aotra dia nahatonga ny ekipanay ho mpamaha olan'ny manam-pahaizana. Izany no antony fototra ahafahantsika mandray anjara amin'ny Lalao Olaimpika.
Vidin'ny fifaninanana izahay ary tsy hanaiky lembenana amin'ny kalitao. Manome fanamarinana isaky ny dingana izahay amin'ny fanarahan-dalàna sy hahitana ny famaritana. Ireo singa noforonina tsara sy namboarina avy amin'ny akora tsara dia tsara lavitra noho ny vokatra vita mora ary lafo kokoa amin'ny farany. Amin'ny alàlan'ny fampiofanana Induction sy fiofanana tsy tapaka, ny mpiasanay dia manana fahatsapana kalitao matanjaka.
Mahazo ara-potoana ny baikonao ianao, amin'ny antsipiriany sy amin'ny famaritana.
Fikosoham-baravarankely, fihodinan'ny CNC, fametahana metaly, dingam-panamboarana vy vita amin'ny metaly hamaly ny baikonao.
Mpanatanteraka serivisy ho an'ny mpanjifa 4 za-draharaha no manompo anao ao anatin'ny 24 ora 7 andro. Miezaka izahay mba ho mora azo sy mifampiresaka toy ny 'fivarotana milina eto an-toerana'. Misy izahay rehefa mila anay ianao. Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny chat an-tserasera, antso an-tariby na mailaka.